Ikhosi elungileyo yasimahla ye-AutoCAD 2013 -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ikhosi ezilungileyo AutoCAD ezamahala 2013
Ngubani ongafuniyo ikhosi yasimahla ye-AutoCAD ...
Ekugqibeleni akukho nto inje ngokuthatha ikhosi esesikweni kunye nomqeqeshi olungileyo wokufunda i-AutoCAD. Kodwa ukhetho endizokubonisa lona lundishiyile ndimangalisiwe, ndicinga ukuba i-AutoCAD 2012 ifike kungekudala. Le yikhosi ye-AutoCAD ka-2012 ekhuthazwe ngumbhali weeGuides Inmediatas.com, onomnqweno wokuhlengahlengisa ikhosi esele ikho kwaye kusele i-AutoCAD 2008 kodwa ngoku phantsi kwesixhobo esibonakalayo esitsha kunye nangoko iindaba ze-AutoCAD 2012.
Olona loncedo lukhulu kule khosi kukuba ikwividiyo enezandi ezichaza inyathelo ngenyathelo, kunye noncedo olongezelelweyo lokuvelisa emva kokunika incasa yomntu kunye nobabalo. Ukufunda ngale ndlela kuyasebenza kakhulu, ngakumbi kubasebenzisi abasele beyazi i-AutoCAD, kodwa abalahlekile ngandlel 'ithile ngeempawu ezintsha zesimo esibonakalayo, ngakumbi kuba lo ngumsebenzisi ongathathi zifundo kodwa ofunda ngendlela efundiswayo. Ndikwabona ukuba le khosi ibaluleke kakhulu kubasebenzisi abatsha, kuba ezi ndlela zijolise ekusebenzeni; nangona inokusebenzisa umthambo ekugqibeleni ophuhlisa umsebenzi opheleleyo, onjengokuhlala ezidolophini okanye isicwangciso sendlu, ukuhambisa umthetho ngamnye kwisahluko apho bakhoyo.
Jonga indlela esebenzayo ngayo ukusebenza kweRibhoni, emva kokuba umntu echaze ngokuxhomekeka ngakumbi kunokuba ethuthuke kwiminyaka emibini edlulileyo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ayingabo bonke abantu abanomnqweno wokulahla izinto ezinje ngokukhululekileyo; I-Intanethi ivumele ulwazi oluninzi ukuba lube yedemokhrasi yonke imihla ngakumbi kwaye ngenxa yoko izizathu ezimbalwa zokufunda inkqubo. Senza umbulelo kuLuis Manuel González Nava, umbhali wale mveliso. Nanku umzekelo, kwaye ngezantsi kwesishwankathelo sezihloko esele zikho, ngaphezulu kweevidiyo ezingama-400 esele zikhona ukuthengwa, kubandakanya iphakheji yeebhloko ze-AutoCAD kunye nezinye izixhobo ezongezelelweyo.
Icandelo lokuQala: Iingcamango ezisisiseko ze-AutoCAD
Icandelo lesine, Ukwakhiwa okulula kwezinto
Icandelo lesibini, Umbutho wemidwebo
Icandelo lesithandathu, Ukukhangela
Icandelo lesibhozo, ukubeka kunye nokupapashwa
Icandelo lesibhozo, umzobo omathathu
Ikhosi ithathwa kwi-intanethi, ngaphandle kwentlawulo.
Qala inkqubo ye-AutoCAD ye-2012 kwi-intanethi apha
Kwakhona ikhosi ungathengela i-US $ 34.99 ukuyibona ngaphandle koxhumo lwe-Intanethi
Zonke umzekelo iifayileyekhosi
Iindleko zokuthunyelwa eziquka ekhaya lakho, nakweliphi na ilizwe eMelika naseYurophu.
Ingathengwa yi-PayPal, iKhadi leMatyala kunye noTshintsho lweBhanki.
Ukuba unesipopu sesaphulelo sangaphambilini, okanye ukhutshwe ngephephaFacebook fans, ungangena.
Assalom alekum autocad dasturini O'rganmoqchidim. +998946171616 ifowuni qlin dasturni
manqununu manti gutierrez sanchez uthi:
Ndifunda unyaka wokuqala wesikolo esiphakamileyo kwaye ndifuna ukufunda i-autocad.
jose zambrano uthi:
Ndibaxelele ukuba ndandisanda kutsala umhlala-phantsi njengenjini, ndihlala eGuayaquil, e-Ecuador, kwaye ndifuna ukwenza i-BASIC AUTOCAP izifundo
Ukubulisa kunye nokubulela kakhulu impendulo yakho
Khangela apha uthi:
Ewe, ndandifuna ukushiya ingcaciso emfutshane malunga nawe
indawo ukuze ubone ukuba kukho abantu abafundayo.
Ubuncinane oko ndikubonile. Ndiyathemba ukuba uqhubeka ubhala
Uyenzile ngoku kwaye xa kukho into esinokusebenzisana ngayo kwixesha elizayo, undiqinisekisile.
Oku okunene ndingathanda.
Luis Julios uthi:
Sawubonga ngokuba uthatha inxaxheba kwikhosi efana ne-autocad, eya kukuvumela ukuba ndihlakulele ngokwalo
Ndiyakhathalela ukuthatha izifundo ze-autocad kuba kubaluleke kakhulu ukuphuhlisa umsebenzi wam
ULuis Alberto Riaño uthi:
Ndifuna ukuthatha ikhosi yebhasi inokubulela njengoko unokunceda kwaye xa iiklasi ziqala ukubonga
Sawubona! Ndingathanda ukufunda i-Autocad kunye nekhosi yayo. Ngenxa yokuba ndingayazi indlela yokuyisebenzisa iyakuthintela ukuba ndifake isicelo sesimo esingcono kum msebenzi. Ndiyathanda ukuba ndikuxelele ukuba ungayifumana njani. Ndiyabonga
Sawubona ndinomdla ekuthatheni inkambo ye-autocad ukuba le nto ikhululekileyo, Gcina
jorge espinosa ramirez uthi:
Ndingathanda kakhulu ukuthatha le khosi ndifuna ukufunda ubunjineli bemizi kwaye ndiyazi ukuba esi sixhobo esisisiseko
JAVIER GONZALEZ RIOS uthi:
INQUBO YENKQUBO YENKQUBO-2012 IYA KWANDLA.
felipe molina martinez uthi:
Kuze kube nini ukulinda?
Andizi nto malunga ne-autocad kwaye bafuna ukuba isebe lobunjineli lingithumelele isiqalekiso samahhala kubaqalayo nceda.
luis ukhaliphe uthi:
Ndingathanda ukufunda i-autocad izifundo ukusuka ekuqaleni
UCarlos Caraballo uthi:
Ndingumnikazi we-autocad 2011, unayo lekhosi yokufunda.
Ndiya eColombia, yiyiphi ixabiso lekhosi.
Ungathumela i-imeyili yakho ukudibanisa.
Ndingathanda ukufumana ikhosi ye-autocad ye-free yokufunda kwi-0 sibonga !!
Kutheni kuthiwa mahhala ???
Hayi, ndivela ePanama kwaye ndingathanda ukuthenga ikhosi
Ricardo Chavez uthi:
Ndingathanda ukufumana inkqubo yamahhala ukusuka kwinqanaba le-zero (ekuqaleni)
jose ramon rodriguea hdez. uthi:
Ndihlala kwisixeko saseZitacuaro Michoacan, kuthatha ixesha elingakanani ukuya khona. kwaye kwibhanki intlawulo ingenziwa. mbuliso
UAlejandro Fernandez Villalobos uthi:
Ndiyifumana into ebaluleke kakhulu yokuba izifundo ezibalulekileyo zidemokhrasi kwaye ziyafumaneka kubafundi abaninzi kunye nabantu abanomnqweno wokufunda.
Sithumelele umyalezo, kwaye siya kuba khona kuba mhlawumbi asikho ezweni lakho kwaye umnxeba unzima.
FELIX ALFREDO HERNANDEZ RIVERA uthi:
INGABA UNGAFUNA INOMBOLO YAKHO YOKUXHUMANA NAM?
I-Perü ithatha malunga ne-3 ngeveki kunye nesiqingatha.
Ukuba uthengela i-2013 version ibiza i-29.99 kuphela kunye nokukhishwa kwimihla efanayo.
Ndingathanda ukuthenga ikhosi evela ePeru evela kwisixeko sase-Iquitos kuza kuthatha ixesha elingakanani ukuya khona
arq ookumkani uthi:
Uphakanyiso oluhle kakhulu, ndivela kwi-nicaragua kwaye ndifuna ukufumana ikhosi.
Ndingathanda ukunikela igalelo
http://www.cursolatinonica.vacau.com Kule khasi kukho izifundo ezipheleleyo ze autocad, archicad, njl. kubaqalayo kunye nezinga eliphezulu. tyelela kuyo uya kuyithanda
Ndiyabulela ngokunika le khosi, kwaye ukuba ndiza kwenza ubuninzi balo,
ukuba bangabantwana be-pinche chinada bayakukhuphela mahhala
Iiveki ezintathu ukuya eColombia
Kuthatha ixesha elingakanani ukuya eColombia? Siyabonga.
Ngokuqinisekileyo akufakiwe, iindleko ze-AutoCAD kwi-LT inguqulo engaphezulu kweerandi ze-1,000. Akulindeleke ukuba iya kufakwa kwikhosi ebiza i-34.99
Nangona kunjalo, ngenjongo yokufunda, unokukhuphela i-version epheleleyo
Isebenza njengenguqu eqhelekileyo, ine-watermark kuphela ngexesha lokunyathelisa elithi yinguqulo yemfundo.
Ndiyifumana into enomdla kodwa ndinokungathandabuzeki inkqubo ye-autocad ifakiwe okanye kufuneka ndiyithenge
Ikhosi iye yathengwa ngabantu abaningana baseSpain, ixesha lokufika kukho iiveki ezingama-4, ekubeni iphuma eMexico.
Okwangoku, ikhosi ayizange ilahleke kwaye asizange sibe nezikhalazo.
gustavo hugo mendizabal vargas uthi:
Ndiyomdla ekuthengeni ikhosi kodwa indlela ekhuselekile ngayo xa kuthengwa kwimeko yam Ndilapha eSpeyin Ndingathanda ukwazi ixesha eliza kuthatha ukuya ekhaya
Inkqubo eyenziwa ukuqala ukususela ekuqaleni, ngoko ungesabi.
Kuthekani! Ndiyakhathalela kakhulu kwikhosi, kodwa njengengane ekhankanywe ngentla, ndingathanda ukwazi ukuba ingaba ndingaphi na umqalayo?
elver tineo ingxube uthi:
Ezi zifundo ngokwenene ndiyifunayo, nceda thumela i-akhawunti yokuhlawula
Hugo Davila uthi:
Sawubona ikhosi iquka iingcebiso okanye ukufundisa kwiimeko ezinzima kakhulu ?, Ziziphi zombini zincoma umntu 100% oqalayo.
Ewe, njengoko le nqaku ithi, ukuthunyelwa kweposi ngeposi kufakiwe.
Uhlawula ngekhadi lesikweletu okanye ukudluliselwa kwebhanki.
Ndifuna ukuthenga i-crurso njengentlawulo yee-dorals ze-35 zekhosi, konke oku kufakiwe
raul alejandro lombana uthi:
Ndifuna ulwazi oluninzi malunga nekhosi ye-autocad, intengo kunye nendlela yokuthumela, kuyathakazelisa
UJulio Cesar Romero Gallardo uthi:
Ndiyibaluleke kakhulu yonke imisebenzi echazwe apha kuba iyiluncedo
InguJulio Cesar Romero
Ndikuthumelele i-imeyile ngolwazi
Mna Ignacio, ndithumele ulwazi kwi-imeyile yakho.
i-ignacio acosta grajeda uthi:
Ndingathanda ulwazi oluthe xaxa kuba ndifuna kakhulu ukufumana imibuliso kunye nokubulela
Sawubona ndinomdla kule khosi kwaye ndifuna ukuba uthumele ulwazi. kwi-imeyile yam nceda ndifuna ukwazi ukuba unombulelo kangakanani.
Le khosi ithunyelwa ngeposi yeposi. Ixabisa iidola ze-34.99.
Ndiyabonga kakhulu Ngaba nceda ungithumelele inkambo yamahhala kwi-imeyile yam?
Ngokuqhelekileyo kuthatha phakathi kwe3 kunye nee-4 iiveki. Ndifanele ndifike kule veki.
Sawubona ndithenga ikhosi zee-2 iiveki ezidlulileyo kwaye ayikafiki kodwa ndilapha e-USA kwaye ndifuna ukwazi ukuba uza kufika nini umhla.
melissa imfazwe uthi:
Ndiyathanda i-kiero ukufunda
Ndingathanda ukufunda i-autocad 2012 mahhala, nceda ndilindele ukuba ndithumele imiyalelo kwi-imeyile yam.
UNelson Hernandez uthi:
Sawubona, ndinomdla ekufundeni inkambo ye-AUTOCAD 2012 mahhala, nceda thumela kwi-imeyile yam endimele ndiyenze ukuze ndiyenze.
Ndihlala eColombia, ndiyabonga.
Ukuba uhlala eMexico City, ukuthunyelwa kufika kungaphantsi kweveki.
Ukuba ukhetha ukuyikhetha, siyahlula i-dollar ye-5, oko kukuthi, uya kuhlawula ilingana ze-29.99 zeedola zase-US.
Umele uthumele i-imeyile editor@geofumadas.com ngoko baninika ikhowudi yokuphuhlisa kunye nedilesi apho kufuneka uyihoxise.
Sawubona, kwakhona ndabakhathaza, andifumananga i-imeyile engingazi ukuba ndabashiya iphosakele i-imeyile yam lilivar2@hotmail.com. kwaye ndingathanda ukwazi kwi-CD yaseMexico ukuba kunokwenzeka ukuba uhambe ngokuthe ngqo ukuyibelana ngehelilesi.
Sawubona, ndingathanda ukwenza ikhosi ye-autocad mahhala, nceda undithumele ulwazi ukuba lwenze.
Ikhosi eya kwidilesi yakho iya kufika ngaphantsi kweveki, kuba iphuma eMexico.
Ingcaciso yekhosi inqaku, akukho nto ingakumbi ukukuchazela ngeposi.
jose gonzalez uthi:
Sawubona, mva mva, ndiyakhathalela ukuthatha i-autocad course, ungathumela ulwazi kwi-imeyile yam. Ndihlala eSaltillo, Coahuila, Mex.
Ewe, kwindlela yokucwangciswa kwemishini kukho ubuninzi bokusetyenziswa kwe-AutoCAD.
Ikhosi inomlinganiselo ofanayo, kungakhathaliseki ukuba uya kuphi ukuya kuyo. Yi-US $ 34.99 yokuba unokuhlawula kwibhanki yendawo ngokudluliselwa kwebhanki.
Ndingumatshini wezezimboni kwaye ndifuna kakhulu ukufunda ukudweba kwinqwelo yemoto. Ndingathanda ukwazi ukuba ndinethuba elihle lokulifaka kumatshini. kwaye ukuba ungathumela ulwazi lwekhosi kwiSpanish kunye neendleko zalo. Ndivela ephakathi kwe-Ecuador. Ndiyabulela kakhulu ndikulindele impendulo yakho
Ixabiso li-$ 34.95.
Kwakukuphromotha kwexesha, kodwa kuphela kwiintlawulo ze-PayPal, kuquka ukuthumela.
Kodwa, ixabiso li-$ 25 = i-68.00 soles. kwaye kule ndlela ithi 98.00 soles .. ???
Ungakwazi kwakhona ngokudluliselwa kwebhanki.
Kwikhonkco elithi "Thenga Ngoku".
Sebenzisa i- "Purchase order" ukhetho, kwaye xa udibanisa idatha yakho, uya kufumana iinkcukacha zebhanki ezifunekayo ukuba wenze njalo ngokudluliselwa kwebhanki.
Intlawulo yenziwa kuphela yi-Pay-Pal? Andiyazi indlela yokwenza iintlawulo ngale ndlela .. = (
Ndifuna ukuthenga ikhosi. inombolo ye-akhawunti kwiphina iibhanki ..
Khetha inketho ye-Order Purchase Order. Emva kokuba ufake idatha yakho, idatha yebhanki yebhanki iya kufika kwi-imeyile yokuthunyelwa. Ngaloo ndlela uya ebhanki kwaye unokwenza ukutshintshwa. Ixabiso liquka ukuthunyelwa kwidilesi yakho, ngeposi.
ALEJANDRO MORENO HUAMAN uthi:
Ndihlala e-Peru Region Ancash Ndifuna ukuthenga ikhosi njengam
Sivele sithumele idatha kwi-imeyili yakho.
Ikhosi ibiza iidola ze-34.99 ze-US. Kuquka iindleko zokuthumela.
Akubandakanyi incwadi eprintiweyo, kodwa i-DVD iqulethe iividiyo, incwadi ecacileyo yedijithali.
TITO MEDINA uthi:
NDIYAVUMA KWIQONDO LOKUPHILA KWIVENEZUELA NESCESARIO YINKHAYA YOKUPHILA KUNYE NOKUBA IZA NOKUNYE NOKUNYE (IBHAYIBHILE NE-DVD)
Ndiyathanda kakhulu ukuthenga ikhosi; ungathumela ulwazi oluyimfuneko ukubeka umyalelo wam, ndibhale ukusuka e-Morelia, eMich
Kuhle Njengoko ubona, ngaphakathi kweMexico ikhosi iyafika engaphantsi kweentsuku ze-8.
Macario Calvario Molina uthi:
Ikhondo elilungileyo, ndiyincoma ukuba ithunyelwe ukuba ndiyifumane imeko enombulelo
UJulio Alberto Traficante Gutierez uthi:
Sawubona, ndifuna ukufunda i-AutoCAD, ndihlala eVenezuela kunye ne-100 Kms. Ukusuka apho ndihlala khona bayayichazela ikhosi, ndifuna ukwazi into engcono kum, ukuba ndizithenga ikhosi okanye ukuhamba ngeveki.
Asithengisi inkqubo ye-AutoCAD, kodwa unokuyikhuphela http://students.autodesk.com
Oko sithengisa yikhosi yokufunda ukuyisebenzisa, ixabiso li-34.99 iidola zase-US, kuquka ukuthunyelwa kwidilesi yakho. Kufuneka wenze inkokhelo ngePayPal okanye kwikhadi lekhredithi elihambelana ne-PayPal.
Kungenziwa kwakhona ngokudluliselwa kwebhanki, kunye neNkonzo ye-FastSpring
roque alfonso castro arias uthi:
Ndifuna ukwazi ixabiso le-autocad i-2012, uhlobo lokuhlawula eColombia, apho ukuthumela ifomu lokuthumela kunye nendlela yokufunda ukuyisebenzisa ukuze ndizicwangcise zam, ndiyilungisi
Ikhosi ithathwa kwi-intanethi, ngexesha lakho kwaye ilandele iividiyo.
Ukuba uya-odola iDVD ngeposi, ikhosi yokuzivocavoca, iibhloko ze-AutoCAD nazo zonke iividiyo ozibukeleyo kwi-Intanethi nazo zithunyelwa kuwe. Indleko yeyokomfuziselo, ukuba ucinga ukuba ixabiso libandakanya ukuhambisa ekhayeni lakho ... nokuba uphi.
Kukho naziphi na iimeko eziqinisekisiwe.
Sawubona, ndivela eArgentina, ndingathanda ukufumana ulwazi olungakumbi malunga nekhosi, malunga nokuhanjiswa kunye neerhafu ezifanayo, luhlobo oluthile lwesatifikethi olwandisiweyo ekupheleni? Ndiyathanda ukwenza oko, ngoko ndiza kulinda impendulo yakho.
Ngokuphathelene, .... Ndinqwenela ukufunda ikhosi ye-AutoCAD
Baye bazise iinkcukacha ngokubulela.
Mercedes Giuffrida uthi:
Yamkela ambulisa. Ndingumqulunqi, umqali we-Autocad kwaye ndinomdla kwikhosi ye-2012 autocad. Nceda uthumele ikhonkco kwi-imeyile yam ukuba uthathe inkambo yamahhala, Siyabonga!
Ndivela eSantiago del Estero, eArgentina kwaye ndifuna inkqubo ye-AutoCAD Civil 3D 2012 ngesiSpanish. Ndiyabonga
Ing.Civil Alfredo N uthi:
Ndingathanda kakhulu ukufunda i-Auto CAD
Ndifumana njani iincwadi zeemoto kwi-intanethi? uthi:
Ndifuna ukufunda i-auto cad
Sibila González uthi:
Ndifuna ukufunda i-autocad, kuba ndiyakhela kwaye ndifuna ukuzicwangcisa zam izicwangciso.
Uhlawula iRandi ye-34.99 kwaye siyithumela kwidilesi osinika yona xa usenza intlawulo.
Ewe, ithunyelwa eMexico. Ngoko siyithumela eCanada ngenani elifanayo.
Edwin Ortiz uthi:
Ndiyomdla kwikhosi kwaye ndifuna ukuyithenga ndingumBolivia, njengoko ndenza ukuba ndibe nayo
Ndihlala eToronto Canada kwaye ndifuna ukwazi ukuba banokundithumela le khosi okanye ukuba sele benayo i-Autocad 2013 kuba yile nkqubo endiyifakile!
VICTOR GLZ uthi:
NDIYAFUNA UKUTHETHA INKQUBO YOKUBA NENKQUBO KUNYE NEMIBONO ****** / ******* NAKUBA NATALY KANYE OKANYE NDITHETHE IINKCUKACHA KWI-MAIL THANKS AND VREETINGS
Le yindlela nje.
james perdomo uthi:
Ndifuna ukwazi ukuba unalo ilayisenisi ye-soflere autocad yokuphinda ibuyele i-2012
Ndifuna ukufunda umqeqeshi ndivela e-Banfield ndiya esikolweni se-18: 30 ukuya kwi-23 Ndiyakwazi ngaphambi kokuba ndibulele.
leonardo herdenez uthi:
Ufuna ukwenza ikota ye-civilcad, ndifuna ukwazi iindleko kunye nalapho bafuna khona
Luis Alfonso contrera chacon uthi:
Iindleko zeerandi ze-34.99, ziquka ukuthumela.
Indlela yokuhlawula i-PayPal okanye ikhadi lekhredithi elihambelana ne-PayPal kunye nokudluliselwa kwebhanki.
Ndinomdla kwinqanaba le-autocad eColombia efanelekileyo kwi-saw, kunye nendlela endiyenzayo ngayo
jenry espinoza loyola uthi:
Ndiyakunomdla ekufundeni le nkqubo ye-autocad
Siyamkela ikhadi lekhredithi, i-PayPal kunye nokutshintshwa kwebhanki.
Ixabiso li-34.99 yeedola zase-US okanye elilingana naloo mali.
Ngokukhawuleza xa ndifumana ikhosi apha eVenezuela, ukuyihlawula eBolivares? Ingenzeka njani ukuthengiswa kwezorhwebo, ngeyiphi ibhanki?
Ndingaluvuyela uncedo lwakho, nemibuliso …….
Ndiyomdla kwikhosi yakho ye-autocad, ukukhetha kwam kukudonga kweendonga de ukucinga kwakho ukuba uyakhele ngokwenene, ngokukodwa ndifuna ukwazi izixhobo kwi-autocad ukudweba nokuzakhela kuphela.
Ndiyabonga kakhulu ngoncedo lwakho.
ibhokhwe elibomvu lemiguel uthi:
Ndiyomculi wokwakha, ndifuna ukufunda i-autocad 2012 yokugqibela.
Ewe, unokuthunyelwa e-Italy kuloo xabiso.
Akunandaba ukuba unayo inguqulelo ye-AutoCAD, imiyalelo ifanayo, umahluko ukuba le nkalo ayifaki i-routes ye-Architecture ukuba inguqulo yakho inayo.
Miguel Angel Cardozo uthi:
Ndihlala eItaly, ungayithumela apha, ndine-Autocad Architectra 2009, ndingenza ntoni na?
NDIFUNDA NJANI IIMPENDULO ZEMFOMO?
Ndifuna ikhosi ye-autocad ye-2012 xa ifika kwikhaya lakho
Xa ufaka ikhonkco lokuhlawula, unokukhetha imali yelizwe lakho kunye nokulingana kubonakala.
luis eduardo plata huertas uthi:
hi Manuel Ndingathanda ukwazi ixabiso lekhosi ukuxabisa kwi-pesos yasePolombia ngokubonga kwangaphambili
Kule nqaku iindleko zekhosi zichazwe xa zithunyelwa kwifomathi ngokomzimba ngeposi.
Sawubona, ndifuna ukwazi iindleko zekhosi
Ikhowudi esikunike yona, ungena kwindawo yokulandelela yaseMexico Post, kwaye iya kukuxelela ukuba yeyiphi imeko yokuthumela.
UCarlos Herraez uthi:
umbuliso Ndisithi kuba ngabokugqibela 13 / 3 / 2012, ndathi ikhosi AutoCAD 2012, ndingathanda ukwazi kukulanda ukuba umyalelo online nge, njengokuba ukuba ufake ipasiwedi ndafumana.
Ndiyabulela kakhulu, uCarlos Herraez
Ukuba uhlala eMexico ungenza idiphozithi kwi-Bancomer, elilinganayo yi-319 pesos.
Emva kokuba idiphozithi yenziwe usithumelele ikopi yokukhangela okanye ifoto ebonakalayo yediphozithi kwaye siya kuyithumela kuwe.
Yonke into yeklasi eDVD enye
afternoon've elungileyo ukubuka ezinye capiulos AutoCAD intanethi kwaye uthande kakhulu, kwaye sivuyisana hiso loo khosi abo bafuna ukufunda nokuhlaziya kuthi ngaloo program.
Ndingumhlobo osondeleyo kule nkqubo kwaye ndicaphukile kangangokuba ndicinga ukufumana.
kwaye ndinemibuzo embalwa nje:
Inkonzo yokuthunyelwa ifike kuze kube yile cd. juarez chihuahua ??
kwaye zingaphi na ezilinganayo nexabiso lekhosi kwi pes pes Mexico?
kwaye iindidi ezininzi zeDVD ziqulethe?
oko bekuza kuba kusengaphambili ukubulela kakhulu kwikhosi kwaye uyathokoza.
Ewe, unokuhlawula ngokudluliselwa kwebhanki.
Nceda, ndinomdla kwikhosi ye-2012 AutoCad. Ndifuna ukwazi ukuba ikhosi ingahlawulwa ngokudluliselwa.
Ndiyabulela iwaka lamawaka, ndiyabulela kuwe.
Ndifuna ukwazi i-basic course ye-autocad, ukuze ndifunde kwaye ndiphucule kwimisebenzi yam yomsebenzi.
Inkqubo ye-AutoCAD ikhululekile, kufuneka uyibone kwiphepha esixhuma kuyo. Ukufumana i-version entsha ye-AutoCAD 2012 mahhala ungayilanda http://students.autodesk.com
Jose Amado Aguilera Quispe uthi:
Njengoko ndenza ukuba ndibhalise kwiklasi ndifuna ukufunda intsha entsha
Ndingayifumana njani ikhosi okanye i-Autocad 2012? nangona kubalulekile.
Kubonakala ukuba awukwazi ukuthuma
Ukubulisa uManuel Medina Ndiyakuthandayo kwi-autocad course 2011 kodwa andiyiboni i-imeyile yakho, ndiyabathumela wam ukuze sikwazi ukuthetha
I-Naviskork yiprogram ye-AutoDesk, musa ukuyithumela ngaphandle kwelinye ifomathi, kuba loo nkqubo ifunda iifayile
Ndidinga ukwazi ukuba ndingayibona njani ifayile ye-autocad kwinkqubo ye-navisworks .. ukuba ikhutshelwa njani ukuze le nkqubo ikwazi ukuyifunda… ??
vergara - peru uthi:
enkosi lo igalelo elikhulu uMnu Nava, bambalwa abantu ndlela desinterasada abonelele ngezixhobo zeekhosi isifundo simahla luncedo njengoko AutoCAD.
Walter Rúa Cerón uthi:
Ndingathanda ukufunda izifundo zamahhala ezifundiswa nguWe; ukuba bakwazi ukuqonda oko kukuzimela nge-2D kunye ne-3D, malunga nokulungiselela izicwangciso (ngokubanzi); Ngenyameko ndirhoxisa ku-Us. ukukubona kungekudala
Akukho sidingo sokubonga uManuel, ukubingelela nokuqhubeka nomsebenzi wakho.
Ziziphi iindaba ezilungileyo kakhulu ngekhosi yamahhala, i-auto cad
Ndibhalela kukuxelela ukuba i-Autocad 2012, ukusuka kwiSkrini ukuya kwinyani, iphelile. Namhlanje ndilayishe i-40 kunye nesahluko sokugqibela kwiphepha. Kulo mba ndingathanda ukwenza amanye amazwana:
-Ndiyayixabisa ngakumbi into ekuthethwa ngayo kule khosi. Utyelelo endilufumeneyo kwiphepha lendawo yakho lubaluleke kakhulu kum.
-Ndiyazi ukuba ikhosi ingaphuculwa ngeendlela ezininzi. Kwinguqu yayo elandelayo ndiza kuthatha ithuba lokongeza imizekelo kwaye ndikhangele izihloko ezahlukeneyo. Ngapha koko, ibikwindlela yokuba uhlaziyo lwayo lukhawuleze ngokukhawuleza nje ukuba sinenkqubo ka-2013 yenkqubo ekhoyo kwaye ayifani ngoku, eyandithatha iinyanga ezili-10 ukuyigqiba, ezi-3 ngaphezulu kokucwangcisiweyo.
-Kwiintsuku ezimbalwa ezizayo ndiza kuba nayo idiski yohlobo olufanayo, kwabo bakufumanisa kunzima ukuyibona kwi-intanethi kwaye bacele ukuyikhuphela. Iya kuba nokongeza okuncinci kwaye iindleko zayo ziya kufikeleleka kakhulu, ukongeza kwikhosi yasimahla iya kuqhubeka ukubakho.
-Kwakhona ngeentsuku ezimbalwa iya kufumaneka kwinto, ubuncinci kum, indawo eyi-1 yezifundo zasimahla zekhompyuter kwi-Intanethi: http://www.aulaclic.es
Ndiyithathe eli thuba ukuba ndikunqwenele okulungileyo kwieholide ezizayo.
German vargas uthi:
Ndingenza njani i-autocad yekhosi ngekhululekile
sandra rodriguez ipine uthi:
unomdla kwikhosi ye-2012 autocad
Ikhosi epheleleyo ye-AutoCAD 2012 ikukhonkco ephawulwe ekupheleni kwinqaku
Ukuyibona kwi-intanethi ayikho indleko.
MILTON OVIEDO uthi:
Ndiyathanda, ndiyakuthanda ukufumana ikhosi endingathanda ukuba ikhululeke. Efanelekileyo
Iividiyo ziza kubonwa kwi-intanethi. Awukwazi ukulanda.
IINKCACA ZENKQUBO uthi:
Ndingayenza njani into yokubonga i-claces ndiyandulele kakhulu
umnikelo ogqwesileyo …… !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ukufikelela kumavidiyo akhululekile, landela ikhonkco kwiiHhovisi ezingabhalwanga.
antonio virhuez uthi:
Ndifuna ukwazi ukuba ndibhajista njani, kwaye ixabiso elifanelekileyo lifanelekileyo kangakanani, kunye nexesha lekhosi, siyabonga.
Ukuthatha inkambo ye-AutoCAD, vele uye kwikhonkco
Kukho izixhumanisi zevidiyo nganye.
Igalelo elilungileyo .. Ndivela eParaguay kunye nokubulisa
Sawu, ndifuna ukwenza le khosi kwaye ndifuna ukufumana ulwazi oluninzi.
nceda, nceda ndincede, ndifuna inkqubo yamahhala, i-grasias
Inkqubo ebalaseleyo kodwa nje ngeeklasi
inkqubo efanelekileyo kakhulu phantsi kweeklasi
Ukuba ucela ikhosi, inkululeko ngaphandle kokuba ubukele iividiyo kwi-intanethi.
Ukuba ucela i-AutoCAD, oku akukho sikhululekile. Iphethwe yi-AutoDesk kwaye kuyimfuneko ukuyithenga, i-LT ingcaciso yeendleko ze-AutoCAD 2012 malunga needola ezili-1 zamaRandi.
PAOLA SALAZAR uthi:
NJANI YAZI kanje INKQUBO ukhululekile ukuba FUNDA XA endiyaziyo UNPOC ode AutoCAD 2011 kodwa AWODW lokundixelela PLEASE !!!
Inkambo ayikwazi ukulayishwa, kufuneka ubone amavidiyo axhunyiwe kwi-intanethi.
Mna, ndiyinto entsha yokusebenzisa i-AutoCAD, kwaye ndifuna ukukubulela ngegalelo le khosi kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ndiyakwazi ukuyilanda kwaye njani, ndiyakuyixabisa kakhulu.
URoberts Basaldúa uthi:
Izinto ezintsha ze-AutoCAD 2012 ukuba imivalo emitsha kunye nemiyalelo inikezela ngenguqulelo entsha yeSoftware ye-AUTODESK, oku kusetyenziswe kubuNjineli boLuntu kunye noLwakhiwo lwezoLuntu kunye neNdlela.
Kukho ezinye iinkampani kwi-intanethi ezikhonza izifundo ngale ndlela nge-Microstation, kodwa zihlawulwa.
Baxelele ukuba bakunike ikhowudi yesaphulelo "geofumadas"
Ndingathanda ukwazi ukuba kukho iikhosi ze-Microstation v8i?